Deg Deg: waqtigii ku dhawaaqista wasiirada oo is badalay iyo Saxaafadda oo looga yeeray Villa Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Deg Deg: waqtigii ku dhawaaqista wasiirada oo is badalay iyo Saxaafadda oo...
Deg Deg: waqtigii ku dhawaaqista wasiirada oo is badalay iyo Saxaafadda oo looga yeeray Villa Soomaaliya
Wararkii ugu dambeeyey ee soo gaaray caasimadda Online ayaa xaqiijinayo inu isbadal deg deg ah ku dhacay waqtigii lo qorsheeyey in wasiirada lagu dhawaaqay oo ahaa maalinta Jimcaha ah.
Wararka hadda soo dhacay ayaa shegayo in wasiirada lagu dhawaaqi doono maanta weliba xilliga dambe waana sida rasmi ah ee kasoo baxday Xafiiska Ra’isulwasaaraha.
Salaadda maqrib kadib ee xilliga Muqdisho ayaa lagu ballansan yahay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya markaas oo lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada oo uu soo diyaariyey Xasan Cali Kheyre oo ah Ra’isulwasaaraha dalka.
Waxaa la filayaa inay halkaas ka dhacdo munaasabad yar oo lagu soo bandhigayo wasiirada waxaana halkaas lagu casuumay inay imaadaan guddoomiyayaasha labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in haatan ay socoto diyaarinta xaflada kooban ee looga dhawaaqayo Golaha Wasiirada, waxaana arrinta magacaabista Golaha Wasiirada si aad ah looga hadal hayaa Xafiisyada dowladda.
Sidoo kale qaar kamid ah saxaafadda Muqdisho ayaa looga yeeray Villa Soomaaliya si ay goobjoog uga noqdaan arrinta magacaabista wasiirada.